Home Wararka Xog muhiim ah: MW Farmajo oo si ADAG u Diidan Sharciga Doorashada...
Xog muhiim ah: MW Farmajo oo si ADAG u Diidan Sharciga Doorashada ee Hadda Baarlamaanka ay Doodiisu ka Socoto. Akriso.
Xog aan lala gabban oo ay Muqdisho.online ka heshay Madaxtooyada Iyo Xildhibaanno kudhow Madaxweynaha Sida Xil. Fowzia Xaji Aden Iyo Xil Zakariye Xaaji Maxamuud ayaa sheegeysa inuu MW Farmajo si aad ah uu uga soo horjeedo sharciga doorashooyinka ee hadda dooddiisu ka socota Barlamanka.
MW Farmaajo oo intii uu xilka hayey aan isku howlin diyaarinta doorasho ka dhacdaa dalka, taas oo ka mid ah masuuliyada saran xukumadda ayaa hadda ku soo baraarugay in sharciga hadda Baarlamaanka yaalla uu keeni karo in ay doorashasho ka dhacdo dalka taas oo hubaal ah in aanan dib loo dooran doonin. MW Farmajo oo ay caadadiisa tahay maahsanaan iyo mar soo bood ayaa bilaabay in uu si toos ula dagaalaamo ansixinta sharciga si ay u suurto gasho in waqtiga loo dheereeyo.
Faramajo waxaa uu hadda si adag ugu dagaallamayaa inuusan sharciga soo bixin waxaanu abuuri doonaa caqabadao badan oo uu is leeyahay ku dib dhig ansixinta sharciga, waxana ka mid ah in qaraxyadii dib loo soo cusbooneysiyey si loo cabsigeliyo dadka iyo Barlamanka.
Madaxweynaha ayaa adeegsanaya dariiqooyin kale duwan si sharciga ay hadda dooddiisu ka socoto Baarlamaanka loo carqaladeeyo ayaa laga hayaa dad isaga ku dhow.
Waxaasa foolxxumo ah in qaar ka mid ah madaxda Xisbiyada oo ay ugu horeeyaan Xil Fowzia Xaji Aden iyo Xil Zakariye Xaaji Maxamuud u dagaallamayaan inuu fulo damaca Farmajo oo ah inaan doorasho qabsoomin, lana kororsado waqtiga.
Waxaa ayaan darro ah in labadan xildhibaan oo inta badan loo haystay dad mudan oo waddaniyiin ah ay hadda ku soo baxaan wax aan laga fileyn. Xildhibaan Zakariya oo waligiis waddaniyada iskaga ooysiin jiray ayaa maanta waxaa uu hoosta kaga jiraan Itaabooinyaankii u shalay sheegayey inuu la dagaal sanyahay.
Sodoo kale Xil Fowzia oo soo noqotay wasiirka Arrimaha dibadda, inkastoo aan musuqmaasuqeedii dib loo raacin ayaa gabadheeda hadda looga dhigay xooghayaha kowaad ee Safaaradda Tanzania si ay u taageerto mashruuca uu Farmaajo ku doonayo in waqtiga loo Kordhiyo, iyadoo sidoo kale laga balan qaaday in Fowzia lagu badali doonno R/ku xigeenka Mahdi Guuleed oo ay isku hayb yihiin. Mahdi ayaa beryahan xiriirka uu la layhay Madaxwayne Farmaajo sii xumaanayay isaga oo usii dhawaanayay RW Khayre oo isagana wata middiyo af leh oo uu rabo inuu qaranka qeybta hartay ku sii qasho. Kheyre ayaa raba inuu la kordhisto muddada balse dhin kale u wata.
Dhinaca kale, waxaa Faraamjo uu adeegsanayaa Gudoomiyaha Gudiga doorashooyinka Xaliima Yarey oo bilowday in ay qabato shirar looga soo horjeedo doodaha Baarlamaanka ka socda oo ay u bixisay doowadaag. Xaliima Yarey oo u muuqqata inay ilaalshaneyso kursigeeda ilaa bartamaha sannadka soo socda ayaa cad inaysan howsheeda ka mid ahayn sharci dejin, waxayna faraha la gashay howl u gaar ah Barlamaanka taas oo laga yaabo in ay Xildhibaanada dalbadaan in Xaliima looga yeero Baarlamaanka si arrinta xad gudubka ee ay faraha la gashay wax looga weydiiyo loogana qaado tallaabada ku haboon.
Guud ahaan waxaa muuqanaya in MW Farmaajo ku howlan yahay curiyaaminta howlaha la xiriira dalka dhinac kasta waxaanu hadda abuurayaa qaab uu ku sii cimridheereysto si uu sii wado hagardaamada uu dalka ku hayo, inkastoo aan waxba la iska weydiin hagardaamooyinkaas oo sharciga lala sugayo Waxaana tusaale u ah dhibaatoyinkii la xiriiray doorashooyinkii ka dhacay Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo tan mudada lixda bilood ah ee ka taagan GalMudug.
Beesha Caalamka iyo Waddamada daneeya Somaliya.
Waxaa aad usoo kordhaya dareenka ay dalalka la socda arrimaha Somaliya ay ka qabaan in Maamulka Farmaajo iyo Khayre ay awoodi karaan in ay dalka sii wadi karaan , iyo in ay doorasho qaban karaan haddii xataa waqti loogu daro, maadaama ay ku guul daraysteen in qabtaan doorashada GulMudug oo Kheyre iyo Farmajaba ay degaan ahaan ka soo jeedaan, tii Baydhabo oo ay dad ku laayeen iyo tii Jubaland oo ay wali dhib ku hayaan. Waxaana suuragal ah in haddii ay doorasho guud qabashadeeda isku dayaan uu dhib weyn ka dhici karo.
Xafiisyada safiirada beesha Caalamka iyo wakiilka XGQM mudane James Swan Waxaa aad looga hadal hayaa in loo baahan yahay in dalka laga dhiso dowlada midnimo Qaran (National Unity Government) oo ay masuuliyadeedu tahay oo kaliya qabashada doorashada inta aanu dhamaan sannadka 2020. Xukuumadda ayaa guud ahaan ku guul garaysatay in ay gudato masuuliyaddii ka sarnayd iskuhaynta dalka iyo xalinta Kh ilaafaadka, balse iyadaaba abuureysay khilaafadka , wax ay xalliso iska dhaafe. Waxaa cid kastaa u muuqata inaysan dowladdu fahamsaneyn inta khald oo ahaa kuwa waaweyn oo khater ahaa ee ay beesha caalamka aamustay sida;
Weerarkii Cabdiraxman Cabdishakuur iyo Dadkii lagu laayey gurigiisa oo ah dembi calami ah oo laga galay xuquuda bani-aadamka iyo shuruucda dalka u taalla.
Dhiibistii Qalbidhagax oo ah dembo laga muwadin Somaliyeed iyo jebinta Distuurka dalka.
Dadkii Baydhabo lagu xasuuqay oo ah dembi calami ah.
Eryiddii wakiillladii Xogahaya Guud ee QM iyo Kii hay’adda Beeraha Adduunka ee FAO oo gef dibolomaasiyadeed.
Waxaa muuqata in khaladaadkaan Dhammaantood looga aamusay dowladda Famajo waxaana hadda soo baxaya masuuuliyiintii hay’adaha caalamiga sida shakhsiyan safiirada iyo wakillada caalamiga oo ay ahayd inay mowqif adag ka qataan arrimahaas gaboodfalka wada ah oo ka aamusay ayaa maanta waxaa kula xisaabtamaya dalkakooda, iyadoo shacbigana uu ku la xisaabatami doono maalinta uu awood u yeesho.
Hay’adaha caalamiga iyo shacbiga Somaliyeed Waxaa aad loo gareystay in uu dalka dib ugu noqday xaaladii jirtay 2011 taas oo kaliftay in dalka lagu soo rogo Nidaamkii Kambala (Kampala accord) laguna dhisay xukuumaddii uu Madaxda ka ahaa Abdiwali Gaas taas oo suurta gelisay in ay dalka doorasho ka dhacdo muddo sannad ah gudihiisa. Waxaana loogu bahan yahay in hadda la dhiso dowlad midnimo qaran oo la siiyo waqti tilmaaman iyo hawl tilmaaman si dalka looga badbaadiyo inuu dumo. Dumista 2020 ee waqtigaan dalka ku iman kartaa waa ka culus tahay tii ku timid 1991 waayo dalka markaas waxaa uu lahaa dowlad muddo wax qabaneysay, tan waa lagu baaba’ayaa oo waxaa laga yaabaa inay dhacdo sidii Rwanda 1994.